Crystal Palace oo guuldarro ku baday Man United garoonkeeda Old Trafford… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 19 Sebt 2020. Crystal Palace ayaa guuldarro ku baday Manchester United garoonkeeda Old Trafford, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Crystal Palace.
Daqiiqadii 7-aad Crystal Palace ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Andros Townsend, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jeffrey Schlupp.
Daqiiqadii 72-aad kooxda Crystal Palace ayaa heshay Rigoore waxaana gool u badelay Wilfried Zaha, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd.
Laakiin daqiiqadii 74-aad Manchester United ayaa la timid gool, waxaana 1-2 ka dhigay dheesha xiddiga dhawaan-galka ah ee Donny van de Beek.
Daqiiqadii 85-aad Wilfried Zaha ayaa niyadjabiyay kooxda Manchester United, kaddib markii uu dheesha ka dhigay 1-3 ay ku hoggaamineysay Crystal Palace
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-3 ay ku soo adkaatay Crystal Palace oo ku booqatay kooxda Manchester United garoonkeeda Old Trafford, Red Devils ayaana guuldarro kaga daah furatay kulankeeda ugu horreeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ee 2020-21.